तपाइँको इकामर्स व्यापार लाई बढावा दिन IGTV कसरी प्रयोग गर्ने? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक फेब्रुअरी 18, 2021 फेब्रुअरी 17, 2021 जेफ ब्राइस B2B, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, प्रविधि, थोक, थोक र B2B बजार
IGTV फलफूल छ र यो डिजिटल मार्केटिंग को लागी विचार गर्न एक निश्चित स्थान हो।
जे होस् युट्यूब लामो समयको लागि भिडियो बजारमा छ, इन्स्टाग्राम टिभीले केहि प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्दछ र युट्यूबमा धेरै फाइदाहरू हाइलाइट गर्दछ।
ईकामर्स धेरै जसो डिजिटल मार्केटि and र इन्स्टाको विकास र लोकप्रियताको लागि धेरै कारणहरूमा निर्भर गर्दछ।
IGTV के हो?
आईजी टिभी स्ट्यान्ड-अलोन अनुप्रयोगको रूपमा वा आईजीमा नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। नियमित इन्स्टाग्राम रेकर्डिले १ मिनेट भन्दा धेरै भिडियोको लागि अनुमति दिँदैन, तर आईजीटीभीले त्यो अवरोधलाई तोड्दछ।
प्रत्येक प्रयोगकर्ताले आफ्नै आईजीटीभी च्यानल परिभाषित गर्न सक्दछ र भिडियो ढाँचामा १० मिनेटसम्म सामग्री साझा गर्न सक्दछ। सत्यापित इंस्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू वा डेस्कटपबाट अपलोडहरू, पोष्ट गरिएका भिडियोहरू १ घण्टा अवधिमा गर्न सक्छन्।
IGTV ले तपाईंलाई स्क्रोलि use प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, यसले विभिन्न पार्टीहरूमा दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न कलको रूपमा काम गर्दछ।
त्यहाँ जो एक इंस्टाग्राममा जडान गर्न चाहानुहुन्छ को लागी Insta अनुप्रयोग को शीर्ष मा एक इंस्टाग्राम टिभी आइकन छ, तर यो अब हटाइएको छ।
तपाईंले देख्नु भएको व्यक्तिको IGTV भिडियोहरू तपाईंको नियमित IG स्ट्रिममा देखा पर्नेछ, र तपाईंले च्यानलमा हेर्नुहुने खाताहरूबाट IGTV भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए, यसलाई सजिलो बनाउनको लागि, इन्स्टाग्रामले आइकनहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। पूर्ण इन्स्टा टिभी पहुँच गर्न चाहनेहरूले छुट्टै कार्यक्रम मार्फत पहुँच गर्न सक्दछन्।
IGTV बनाम YouTube
यूट्यूब लामो समयको लागि भिडियो बजारमा छ, इन्स्टाग्राम टिभी प्रस्तावहरू केहि प्रयोगकर्ताहरू र YouTube मा धेरै फाइदाहरू हाइलाइट गर्दछ:
कुनै विज्ञापन छैन - IGTV का अहिले कुनै विज्ञापन छैन। तपाईंको विज्ञापनले दर्शकहरूलाई चिन्तित गर्दैन र उनीहरूले तपाईंको भिडियोहरू उनीहरूको रूचि हराए बिना अवलोकन गर्न सक्दछन्, जुन यूट्यूबमा यस्तो अवस्थामा छैन।
मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुकूलित: यूट्यूब ल्यापटपको युगमा सुरूवात भएको थियो, त्यसैले तपाईंको भिडियोहरू सँधै क्षैतिज भएको छ। स्मार्टफोनहरूको क्रान्ति पछि, यूट्यूबले तेर्सो भिडियो ढाँचा बनाउन जारी राख्यो, र प्रयोगकर्ताहरूलाई फोनहरू उनीहरूलाई पूरा स्क्रिनमा हेर्नका लागि झुकाउन आवश्यक छ। इन्स्टाग्राम टिभी विशेष रूपमा ठाडो ढाँचाको साथ मोबाइल फोनहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो जुन तेर्सो रूपमा घुमाउन आवश्यक छैन। के यो फोनमा हेर्नका लागि अनुकूलित छ, यो पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलैसँग उनीहरूको फोनमा भिडियोहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन डिजाइन गरिएको हो।
दुबै सोशल मिडिया अनुप्रयोगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न जारी राख्नेछन्, तर इन्स्टाग्रामको "एकीकृत" श्रोताको एक अरब भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन्। एक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राम टिभी मार्फत आफ्नो च्यानल सुरू गरेपछि उनीहरूका अनुयायीहरू यसमा जोडिए।
IGTV र e- वाणिज्य
ईकामर्स धेरै जसो डिजिटल मार्केटि and र इन्स्टाको विकास र लोकप्रियताको लागि धेरै कारणहरूमा निर्भर गर्दछ। एक सामाजिक प्लेटफर्म हुनुको साथसाथै, आईजी टिभीले नयाँ व्यक्तिहरूमा पुग्नको लागि अधिक तरिकाहरू प्रदान गर्दछ SEO मार्फत र आईजी ट्यागहरू।
आईजी टिभीले यी श्रोतहरू अगाडि ईमेल प्रमोट गर्न प्रयोग गर्दछ। मार्केटिंग यदि एक ब्रान्डले पहिले नै IG र IG कथाहरू प्रयोग गर्दछ, यो समय आईजी टिभीको अपडेट र अधिकतम बनाउनको लागि हो।
तपाईंसँग नियमित दर्शकहरू १ seconds सेकेन्डसम्मका भिडियोहरू र १ मिनेटसम्म भिडियोहरू हेर्दै छन्। आईजी टिभी मार्फत उनीहरूलाई केहि थप दिनुहोस्। इन्स्टाग्राम टिभी भिडियोहरू तपाईंको अनुयायीहरूका च्यानलहरूमा सीधा निर्देशित गरिएको छ, नियमित इन्स्टाग्राम भिडियोहरू जस्तै, अब हेर्नको लागि कुनै प्रयास छैन।
केहि समय पछि, तिनीहरूले छनौट गर्न सक्दछ कि बाँकी आईजी टिभी हेर्ने हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको भिडियो उनीहरूको लागि हेर्न र बाँकीलाई अनुसरण गर्नका लागि पर्याप्त आकर्षक छ।
IGTV ले तपाईंलाई स्क्रोलि use प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, यसले विभिन्न पार्टीहरूमा दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न कलको रूपमा काम गर्दछ। IGTV को फाइदा भनेको यो एक ठाडो भिडियो ढाँचा आवश्यक छ, यसको मतलब तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक धेरै साधारण प्रक्रिया हो।
इन्स्टाग्राम टिभीको लक्ष्य श्रोताको साथ कनेक्ट हुनको लागि अन्तर्क्रियात्मक भिडियो सामग्री बनाउनु हो।
आईजी टिभी इन्स्टाग्रामले प्रस्ताव गरेको अर्को अपडेट क्लिक लिंकहरू हुन्। आईजीले लिंकको पोष्टिंगलाई अनुमति दिँदैन जुन क्याप्शनमा क्लिकयोग्य छ। यदि तपाइँ एक विशेष लि a्कमा दर्शकहरूलाई लक्षित गर्ने लक्ष्य राख्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई बायोमा लिंक थप्न आवश्यक छ र शीर्षकमा स indicate्केत गर्नुपर्दछ कि सम्बन्धित पृष्ठमा लिंक बायोमा छ।
अब, यदि दर्शकहरू साँच्चिकै इच्छुक छन् भने, तपाईं बायोमा जान सक्नुहुन्छ र यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तर सम्भावनाहरू विरलै छन्। आईजी टिभीको साथ, तपाइँ क्याप्शनमा लिंकहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाइँको दर्शक ट्याप गर्न सक्छन् र सीधा तपाइँको लक्ष्यमा जान सक्नुहुन्छ।
यूट्यूब ल्यापटपको युगमा सुरूवात भएको थियो, त्यसैले तपाईंको भिडियोहरू सँधै तेर्सो रहेको छ। स्मार्टफोनहरूको क्रान्ति पछि, यूट्यूबले तेर्सो भिडियो ढाँचा बनाउन जारी राख्यो, र प्रयोगकर्ताहरूले फोनहरूलाई उनीहरूलाई पूर्ण स्क्रीनमा हेर्नका लागि झुकाव गर्न आवश्यक पर्दछ। इन्स्टाग्राम टिभी विशेष रूपमा ठाडो ढाँचाको साथ मोबाइल फोनहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो जुन तेर्सो रूपमा घुमाउन आवश्यक छैन। के यो फोनमा हेर्नका लागि अनुकूलित छ, यो पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलैसँग उनीहरूको फोनमा भिडियोहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन डिजाइन गरिएको हो।
IGTV सामग्रीको प्रकार
तपाइँ आईजी टिभी च्यानल सामग्री धेरै तरीकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। तल उल्लेखित केही विचारहरू हेरौं:
तपाईंले एक ब्रान्ड वा कम्पनी वा केहि उत्पादनहरूको बारेमा धेरै सार्वजनिक प्रश्नहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ वा साधारण निर्देशनहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ। IGTV प्रयोग गर्नुहोस् प्रश्नहरूको विस्तृत जवाफ दिन। तपाइँका ग्राहकहरूको चिन्तालाई बढी ध्यान दिनुहोस्, र उनीहरूसँग तपाइँको राम्रो सम्बन्ध हुनेछ।
तपाईंको उद्योग वा ब्रान्डको आलामा केहि फरक पर्दैन, श्रोतालाई एक वा दुई सीप सिकाउने प्रयास गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाईको ईमेल व्यायाम उत्पादन बेच्न को लागी एक व्यायाम दिन र घर मा प्रशिक्षण को बारे मा छ।
उही तरिकामा यदि तपाईंको ईमेल। एक ब्रान्ड जसले पेशेवर संगीत ईन्ट्रुमेन्टहरू बेच्न चाहान्छ त्यसले श्रोताहरूलाई आवाज कसरी संयोजन गर्ने बारेमा सुझाव दिन सक्छ। कुनै पनि चीज जुन जनताको लागि लाभदायक हुन सक्छ ब्रान्डको मान बढाउन मद्दत गर्दछ।
S. पर्दा पछाडि
BTS ले श्रोतालाई वास्तवमा तपाईंको ब्रान्ड सामग्री हेर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईको कुनै खास तस्विर वा भिडियो आईजी मा धेरै राम्रो गरी काम गर्‍यो भने तपाई दृश्य दृश्यको पछाडि रमाईलो बनाउनको लागि त्यस दृश्यको सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
जसरी प्रयोगकर्ताहरूले अन्तिम परिणाम मनपराए, उनीहरू पनि यो जाँच गर्न चाहन्थे कि यो कसरी आन्तरिक रूपमा विकसित भयो। जहाँसम्म, तपाईं सबै पोष्टहरूका लागि बीटीएस पोस्ट गर्न प्रयोग गर्नुहुन्न, खास गरी जब उनीहरू पेशेवर देखिदैनन्।
आईजी टिभी सामग्री ढाँचाको एक उत्तम रूपहरू भ्लगहरू हुन्। आईजीले १ मिनेट भिडियो मात्र अनुमति दिन्छ, र तपाईं अधिक गर्न सक्नुहुन्न। जे होस्, IGTV का साथ, तपाईं दर्शकहरूसँग लामो लामो भिडियोहरू प्रयोग गरेर र तिनीहरूमा सीधै भ्लग पोष्ट गर्दै व्यक्तिगत सम्बन्धहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।
उदाहरणको लागि, यदि तपाईं फोटो दिनमा जानुभयो भने, यसले धेरै रमाईला क्षणहरू समावेश गर्दछb/ w तपाईं र टीम। तपाइँका सबै चलचित्रहरू नभुल्नुहोस्। भिडियो बनाउनको लागि केही शान्त र चाखलाग्दो सेक्सनहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
गल्तीहरूले च्यानलको एकान्तता अन्त्य गर्न मद्दत गर्दछ। आईजी टिभीमा दर्शकहरू गम्भीर, ब्रान्ड-उन्मुख भिडियोहरू हेर्न प्रयोग भएकाले रमाइलो र अन्तर्क्रियात्मक भिडियोले कहिलेकाँही प्रयोगकर्ताहरूसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्न सक्दछ।
सांप्रदायिक समाचार इकमर्स igtv इन्स्टाग्राम
एक डिजिटल र सामग्री मार्केटर।